Navoaka ny fanavaozana hanitsiana ny fahalemen'ny KRACK WiFi ho an'ny AirPorts | Avy amin'ny mac aho
Navoaka ny fanavaozana hanitsiana ny fahalemen'ny KRACK WiFi ho an'ny AirPorts
Ary ireo rehetra izay manana toby Apple Wi-Fi ao an-trano dia tratry ny fahalemena izay efa voahitsy tamin'ny kinovan'ny vokatra Apple teo aloha fa namela ny tobin'ny WiFi. Amin'ity tranga ity, ny kinova vaovao dia mahatratra ny AirPorts rehetra, ao anatin'izany ny AirPort Express, AirPort Extreme, ary Time Capsule.
Ny kinova vaovao 7.7.9 dia azo alaina ho an'ny fitaovana izay manohana tambajotra 802.11ac, raha misy kosa ny fanavaozana 7.6.9 ho an'ny tobin'ny toby 802.11n. Na izany na tsy izany tsy misy na dia iray aza amin'ireo toby WiFi an'i Apple tavela raha tsy misy fanavaozana manitsy ny fahalemena izay mamela ny antoko fahatelo hiditra amin'ny alàlan'ny fahalemena ao amin'ny protokol WPA2.
Rehefa niseho io marefo amin'ny tambajotra WPA2, tsaho maro no nampitandrina fa noho ny tsy fijanonan'i Apple amin'ny AirPods, ny tsy fahombiazana hita herinandro vitsivitsy lasa izay dia azo avela tsy misy vahaolana, saingy miaraka amin'ity kinova vaovao ity, na iza na iza manana base AirPort dia voavaha ny olana. Mazava ho azy fa raha tsy misy an'ity fanavaozana ity dia azo ampiasaina ihany koa ireo toby AirPort, saingy naseho tamin'ny marefo izay namboarina teo aloha teo amin'ny fitaovana hafa an'ny lehilahy Cupertino.
Ny fanavaozana ny firmware vaovao navoakan'i Apple dia azo apetraka amin'ny alàlan'ny fampiharana AirPort Utility ho an'ny iOS na MacOS ary manomboka izao dia azo atao ny misintona sy mametraka ireo kinova vaovao. Na izany na tsy izany dia fanavaozana natolotra ho an'ny rehetra izany ary izany ve zava-dehibe ny olana ara-piarovanate-hitsambikina ny orinasa vaovao izahay, ka mamporisika anao hanavao faran'izay haingana.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple » About us » Navoaka ny fanavaozana hanitsiana ny fahalemen'ny KRACK WiFi ho an'ny AirPorts